Esi lelee ma budata fim na usoro maka n'efu na iPhone na iPad | Esi m mac
Budata ihe nkiri efu na iPhone ma ọ bụ iPad
Pablo Aparicio | | ọtụtụ
Taa, anyị na-ekwu maka otu isiokwu kachasị amasị ọtụtụ ndị ọrụ: lelee ma budata ihe nkiri vidio. Obi abụọ dị ukwuu mgbe anyị na-ekwu maka ngwaọrụ mkpanaka, yana karị karịa mgbe ihe anyị nwere bụ ama ma ọ bụ mbadamba nwere sistemụ dị ka iOS, nke na-enye anyị nnukwu nchekwa na nkwụsi ike mana oge ụfọdụ ọ naghị adị mfe iji dị ka anyị ga-amasị m.
N'isiokwu a, anyị ga-akụziri gị otu esi ekiri ma budata ihe nkiri, mana site na iPhone / iPod Touch ma ọ bụ iPad. Ọ bụrụ na anyị chọrọ hụ ha n'ime gụgharia, nke ahụ bụ, na-enweghị nbudata ha, ihe ahụ dị mfe karị, ma ọ bụghị nke ukwuu ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ibudata ihe nkiri n'efu iji nwee obi ụtọ na ha n'ịntanetị. Maka nke ikpeazụ anyị ga-achọ ịdọrọ Storelọ Ahịa ahụ wee kwupụta ụzọ abụọ ọzọ.
Nkwalite: ma ọ bụrụ na ị chọrọ ile usoro na fim maka n'efu na nkasi obi na iPhone ma ọ bụ iPad, ugbu a ị nwere ike nwaa Amazon Prime Video kpamkpam n'efu site na njikọ a.
1 Esi lelee usoro na ihe nkiri n'efu na iPhone ma ọ bụ iPad
1.1 Na ihe nchọgharị ọ bụla
1.2 Site na ngwa e mere maka ya
2 Etu esi ebudata ihe nkiri na usoro ihe nkiri n'efu na iPhone ma ọ bụ iPad
2.1 Budata ihe nkiri efu na vidiyo Weebụ
2.2 Nbudata Movies na Amerigo
Esi lelee usoro na ihe nkiri n'efu na iPhone ma ọ bụ iPad
Na ihe nchọgharị ọ bụla
O nwere ike ọ gaghị abụ azịza ị tụrụ anya ya, mana ọ kacha mma. Ọ bụrụ na ị nwere njikọ Wi-Fi na mpaghara ebe ịchọrọ ịhụ ihe nkiri, ọ kachasị mma ịghara ibudata ha, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ile ha ozugbo na gụgharia. Apple bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị mbụ gbanwere azụ na teknụzụ Flash maka ibe weebụ, na afọ isii mgbe mwepụtara nke iPad, ha na-egosi na ha bụ ntụzi ụkwụ.
Olee otú ịkpụzi draịvụ ike na Mac
M na-akọwa nke a n'ihi na ọtụtụ web peeji na-emeziwanye ma na-adịwanye na ngwaọrụ dịka iPhone / iPad na safari onye na-enweghị mmasị na teknụzụ ochie. Ihe nwere ike inyekwu nsogbu bụ sava ebe a na-akwado vidiyo ahụ, yabụ ana m akwado ịchọ njikọ nke Igwe ojii.
Ọ bụ ezie na m ma na e nwere ọtụtụ peeji ndị ọzọ, M Ana m akwado ndị na-esote n'ihi na m na-achọta ihe m na-achọ n'otu ma ọ bụ nke ọzọ:
Site na peeji abụọ gara aga na-ahọrọ m Chọọ n'ihi na, na mgbakwunye na ịnwe interface dị omimi karị nke na-enye anyị ohere ịdebe ihe anyị hụburu, ọ nwere obodo na-arụsi ọrụ ike na ekele maka okwu anyị nwere ike ịkwụsị ịhụ ihe na-abaghị uru ma ọ bụ hụ ihe anyị agatụghị eche na ọ dị mma.
Site na ngwa e mere maka ya
Anyị nwekwara ike iji iPhone ma ọ bụ iPad lelee usoro na ihe nkiri ma ọ bụrụ na anyị ejiri ngwa Ezubere - na tiori - naanị maka nke a, dị ka nke mbụ n'ime ihe ndị a. Ihe jọgburu onwe ya bụ na, dị ka ị ga-ahụ n’isiokwu na-esonụ, a na-akwụkarị ha ụgwọ. Gini mere iji kwụọ ụgwọ maka ihe anyị nwere ike ime (lee ha n’ebudata na ha) n’efu na Safari?
Etu esi ebudata ihe nkiri na usoro ihe nkiri n'efu na iPhone ma ọ bụ iPad
Budata ihe nkiri efu na vidiyo Weebụ
Otu n'ime nhọrọ kacha mma Vidio Weebụ. Ọ bụ ihe nchọgharị na-emegharị ịnyagharịa site na ụdị ibe weebụ a na nke anyị nwere ike igwu ma ọ bụ ibudata fim ma ọ bụ isi nke usoro kachasị amasị anyị. Ka ibudata fim na usoro na Video Web anyị ga-eso usoro ndị a.
Anyị na-ebudata ngwa vidiyo Downloader Video (ị nwere njikọ dị n'okpuru).
Anyị na-emeghe Video Downloader.
Ugbu a, anyị na-aga na peeji nke dị ka Pordede, HDFull ma ọ bụ nhọrọ kachasị amasị gị.
Anyị na-eme nchọgharị na, mgbe anyị chọtara vidiyo anyị chọrọ ibudata, anyị na-enweta ngalaba njikọ ya, otu ngwa ahụ ga-egosi anyị windo mmapụta nwere njikọ ndị dịnụ, yabụ na anyị agaghị e copyomi njikọ ma ọ bụ nwee ntughari ibudata ọdịnaya.
Na mmapụta window anyị ga-ahọrọ «Play na ngwaọrụ» ịhụ ya na nkwanye ma ọ bụ «Download» ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ibudata ya na-ahụ ya offline. Anyị nwekwara nhọrọ iji detuo njikọ ahụ, mana nke a adịghị mkpa maka anyị. Ngwa ahụ na-enye ohere ibudata oge.
The ikpeazụ nzọụkwụ ndị na-eche maka download rụchaa na-enwe ọdịnaya site iPhone ma ọ bụ iPad offline.
Vidio webụ na-enye anyị ohere igwu vidiyo na Apple TV ma ọ bụ na Chromecastọ bụrụhaala na usoro ahụ abụghị FLV. N'aka nke ọzọ, anyị nwekwara ike itinye ihe nkiri site na iTunes, mana echere m na ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgba ọsọ ha site na iTunes, anyị nwere nhọrọ ka mma, dịka VLC.
Ndụmọdụ jirichaa gị disk ohere na Mac
Video Weebụ - Egwu vidiyo1,99
Budata ihe nkiri na Amerigo
Ọ bụ ezie na nhọrọ gara aga dị mma, n'onwe m na-ahọrọ m ịwụnye ngwa ndị m na-achọghị. Ka m kọwaa: Web Video bụ n'ezie ihe nchọgharị weebụ nke na-eme ka ọ dịrị anyị mfe ibudata, mana dịka ihe nchọgharị ọ na-ahapụ ọtụtụ ihe a chọrọ. Achọrọ m itinye ọzọ ihe nchọgharị dị ike karị Amerigo na, ọ bụrụ na m ga-ebudata fim ma ọ bụ usoro, m ga-emetụ njikọ ndị ahụ.
Isi okwu a bụ iji iPhone ma ọ bụ iPad mee ya dịka anyị ga-eme ya site na ihe nchọgharị weebụ nke desktọọpụ: anyị na-agagharị na peeji nke nbudata, nweta njikọ, metụ nbudata ma chere ka nbudata ga-agwụ. Otu ngwa ahụ na-enye anyị ohere ịlele dọkụmentị, yabụ anyị nwere ike ịhụ ha ozugbo ma ọ bụ kesaa vidiyo iji mepee ya na ndị egwuregwu ndị ọzọ, dịka ndị ahụ anyị kwuru na mbụ VLC. Mfe, ma dị irè.
Amerigo - Njikwa faili17,99
You maraworị otu esi ekiri ihe nkiri na usoro maka n'efu na iPhone ma ọ bụ iPad? Gwa anyị usoro ị na-eji budata ihe nkiri efu ma lelee ha na ngwaọrụ iOS gị:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Budata ihe nkiri efu na iPhone ma ọ bụ iPad
Iji lelee ihe nkiri (Spanish, Latin), usoro, akwụkwọ akụkọ, ọwa TV, Bọọlụ maka n'efu, na-enweghị mgbasa ozi (na weebụ). Gbalịa vi2eo.com nke na-arụ ọrụ kemgbe etiti Septemba 2015 ma nwee ihe karịrị njikọ 29K !!!
Zaghachi vi2eo com
Na ipad m anaghị ekwe ka m hụ ma ọ bụ budata vidiyo ndị ahụ
Zaghachi Claudia Soriano Pérez
Ebee ka fim ndị ebudatara pụtara? Enwere m ike ịhụ ka nbudata ahụ na-aga?
Ndewo, enyemaka dị mma, biko, adịla m na akụkụ na-apụta igwu egwu na ngwaọrụ ahụ, detuo njikọ ahụ ma kagbuo, mana ọ nweghị oge ọ na-ewe m nbudata, amaghị m ihe kpatara m ji nwee iPhone 6s
Apple Pay ga-erukwa na njedebe nke afọ na Denmark na United Arab Emirates
Echere na ire ere ihe dị ka nde Apple 2,8 n'oge Q2